Sein Lyan - စိ န် လျှံ: အဖိုးရယ် အဖွားရယ်
Writer Sein Lyan Time 3:12 am
ကံတရားအတိုင်းဆိုပေမယ့် ရှေ့မှာ အတုယူစရာတွေ သင်ခန်းစာရစရာတွေကိုလဲ အသုံးချတတ်ပါစေလို့..
အင်း ဖတ်သွားတယ် အကိုရေ ဆွေမျိုးတွေကို ခံစားသွားတယ် ကျနော်လဲ အဖိုးကို သတိရသွားတယ် အဖိုးက ကျနော်တို့ကို ချစ်တာပါပဲ။ ဒါပေမဲ့ သူရဲ့ အချစ်က ရင်ထဲမှာပဲ ရှိတာ အပြင်ကို ထုတ်ပြလေ့မရှိသလောက်ပဲ ဒါပေမဲ့ ကျနော်ကတော့ ကျနော့်အဖိုးကို အရမ်းချစ်တာ.. သူဆုံးသွားတာလဲ ကြာနေပါပြီ သတိရသွားတယ် ခုတော့ အဖိုးကော၊ အဖွားကော မရှိတဲ့ မြေးလေးပေါ့း)
အဖိုး၊ အဖွား....ဖိုးစ်ိန် = ချစ်စမ်းစိန်
သူတို့မှာ ရေးစရာ အဖိုးအဖွားတွေက စုံလိ်ုက်တာ.. အနော်ကတော့ အဖိုးအဖွားတွေ သိပ်မမီဘူး.. မေမေ့ အဖေပဲ မှီတယ်... ဒါတောင် သူက ၁၀၂နှစ်ထိ နေသွားလို့...
အဖိုးအဖွားနာမည် ဘယ်သူမှန်းတောင် မမှတ်မိတော့ဘူး
(အင်း ..တူတွေတူမတွေကမွေးတာပဲနေမှာပါး)း) )
အမ တွေက စေတနာနဲ့ အပူမရှာခိုင်းတာ
မတတ်နိုင်ဘူး နားမထောင်ရင်တော့ ရှာပေးစားတော့မယ် ... ရှာကျွေးဖို့ပြင်ထား ..
ဒါကတော့ မကြီးအော်တဲ့ အသံပေါ့နော်။ ဘာလို့ အော်လည်းသိတယ်နော်။ :)
အင်းးးမကြာခင် ကိုယ့်အလှည့်ရောက်တော့မယ်။တို့ကအဘိုးအဘွားတွေနဲ့ သိပ်မနေရဘူး။
8 June 2009 at 06:08
ကိုဖိုးစိန် နှင့် အဖိုးအဖွားတွေ
“သေမှာ သားသမီးတွေက အမေ… အမေ…အမေ ခွဲမသွားပါနဲ့တဲ့… သံဝေဂရစရာပါ…”
“သားသမီးတွေ စိတ်မရှည်တာမျိုး ဂရုမစိုက်တာ မျိုးနဲ့တွေ့ရင် ဘဝနိဂုံးကို ဝမ်းနည်းစွာနဲ့ ချုပ်ရတဲ့ အဖိုးအဖွားတွေကို တော်တော်များမျာတွေ့ဖူးတယ်လေ…”
ရေးပေးတဲ့အတွက် အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဘကြီးတော် အိုဇာတာမကောင်းမှာမပူနဲ့ ။ တူရီးတော်
တစ်ယောက်လုံးရှိတယ် (ဟဲ ဟဲ)
ဟုတ်တယ် .. ဘာမှမလုပ်နိုင် မကိုင်နိုင် သူများကိုချည်းပဲ အားကိုးနေရမယ့် အသက်အရွယ်အထိတော့ ဘဝမှာ မနေချင်ဘူး ... ကိုယ်တွေ အဖိုးအဘွားတွေလည်း ကိုဖိုးစိန် အဖိုးအဘွားတွေလိုပဲ .. အသက်လည်း ကြီးလာရော သားသမီးတွေသာများတာ တစ်ယောက်ကမှ မပြုစုချင်ကြတော့ဘူး .... ကိုယ်တွေအလှည့်ကျရင်ရော ?? မြန်မာမှု အသိုင်းအဝိုင်းမှာ သားသမီးတိုင်းက မိဘတိုင်းကို ပြုစုလုပ်ကျွေးချင်ကြသူချည်းပါပဲ .. ဒါပေမယ့် အိမ်ထောင်ရက်သား ကျသွားတဲ့နောက်မှာ အိမ်ထောင်ရေး အခက်အခဲ၊ စီးပွားရေး အကျပ်အတည်းတွေကြောင့် မိဘကို ဂရုစိုက်ချင်ကြပေမယ့် အနဲနဲ့ အများ လှစ်လျူရှုသလို ဖြစ်သွားကြရတာပါ ... ငြိုငြင်တယ်ရယ်လို့လည်း မဟုတ်လောက်ပါဘူး ... ကိုယ့်ဘဝရပ်တည်မှုကို ကိုယ့်ဘာသာ ကျိုးစားရုန်းကန်နေရတဲ့ ကာလမှာ သက်ကြီးရွယ်အိုတစ်ယောက်ကို တာဝန်ယူထားရတာဆိုတော့ အဲဒီလူရဲ့ မြည်တွန်တောက်တီးမှုက သားသမီးတွေအတွက် စိတ်ညစ်ညူးစရာ ပိုဖြစ်နိုင်တယ်လေ .. အဲအချိန်ကျရင် မိဘမှန်းသိပေမယ့် အနဲနဲ့အများ ငြိုငြင်ကြတော့တာပေါ့ ... ကိုယ်တွေရဲ့ မိဘတွေ အိုမင်းမစွမ်းဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ သူတို့ကို ကိုယ်က ငြိုငြင်တဲ့ စကားမျိုး မထွက်ဖြစ်အောင် ကိုယ်တွေ စီးပွားရေးကောင်းအောင် လုပ်ရမယ် ... ကိုယ်တွေမိဘနေရာ ရောက်ရင်တော့ ကိုယ့်သားသမီးတွေ မငြိုငြင်ရအောင် မြည်တွန်တောက်တီးတတ်မယ့် အကျင့်စရိုက်မျိုးကို ရှောင်ရမယ် .. ပို့စ်ကို ဖတ်ရင်း စဉ်းစာမိတာလေးတွေပါ ...
ပြန် လာ စမ်းးးးး
ရွာရိုးကိုးပေါက် လျှောက်လည်နေတယ် ။။
ကိုဂျီးစ်ိန်တော့ ကြွေးတစ်ခု ကျေသွားပြန်ပြီပေါ့နော်။
ကျနော်တော့ ကျေသေးဘူး။ ဒါပေမယ့် တူများကိုတော့ အချွန်နဲ့ မတက်တယ်။ အဟီးဟီး။
ကိုဂျီးကို တက်ဂ်ထားတယ်။ ဂျစ်လွန်းလို့ ခွိခွိ။
ကောင်းတယ်လို့ မပြောတော့ဘူးနော်။ ရေးထားတာ ကောင်းလွန်းလို့ အဖိုးအဖွားကို သတိရပြီး မျက်ရည်ဝိုင်းသွားတာ ကိုဂျီးကြောင့်။ အဲ့ဒါကြောင့် ပြောတော့ဖူး။ သက်ချင်သက်။ ငွင်းငွင်း။ ခွိ ။
ကောင်းလိုက်တာ ကိုဖိုးစိန်..အစ်ကို့အကြောင်းလေးတွေကို မပျင်းမရိပဲနဲ့ တခါတည်း ဆွဲခေါ်သွားနိုင်အောင် အရေးအသားအရမ်းကောင်းတာပဲ.. ချီးကျူးတယ်အစ်ကိုရာ .. တခုပဲ.. ပေါတာလည်း မနိုင်ဘူးနော်.. ဟားဟား....
အဖိုးရယ် အဖွားရယ် Future အဖိုးလေးရယ်... အကြောင်း လာဖတ်သွားပါတယ်... :-)
တက်ဂ်ပို့စ်လို့ မထင်ဘူး ဖတ်လို့ကောင်းနေတာ.
အင်းးး ဘာလိုလိုနဲ့ နောင်လာမယ့်အနှစ် ၂၀ဆိုရင် တို့
လည်းအသက်ရှင်သေးရင် ဖွားဖွားဝါဖြစ်တော့မှာပဲ..း(
အစ်မငယ်ငယ်ကတော့ မေမေဘက်က ဖိုးဖိုးနဲ့ဖွားဖွား
ကိုအရမ်းချစ်ခဲ့တယ်.. အသက် ၈၂ နှစ်မှာဆုံးကြတယ်.အခုအထိအိပ်မက် မက်နေဆဲပဲ... ဘိုးဘိုးက အရပ်အ
ရှည်ကြီးနဲ့ ရူပါဖြောင့်ဖြောင့်..အသက် ၈၂ နှစ်အထိ စ
တိုင်အပြည့်ပဲနေခဲ့တာလေ... ဖွားဖွားကို အရမ်းချစ်ခဲ့
တယ်..သေတဲ့အထိပဲ.. အစ်မက အဲဒီဖိုးဖိုး နဲ့ဖွားဖွား ၂
ဖေဖေဘက်က ဖွားဖွားပဲသိလိုက်တယ်.. အသက် ၈၁နှစ်မှာ ဆုံးသွားတယ်.. အဲ့ဖွားဖွားကို မချစ်ဖူး။
တာလဲ ပါတာပေါ့လေ... ကိုယ်အသက်ကြီးရင် မြေးတွေ
ချစ်အောင်နေတတ်အောင် ကြိုးစားဦးမှ.း)
ကြီးလာရင် ဘယ်သူ့ မှ အားမကိုးချင်ဘူး ...ခုထဲက အိုစာမင်းစာ ပါရှာထားမှ..တော်ကာကျမယ်နော်။
အများနဲ့မတူ တမူထူးခြားတဲ့ တင်ဆက်မှုလေးကို အားပေးသွားပါတယ်...။
မက်မက်မှာတာ့ အဖိုးလဲ မရှိဘူး အဖွားလဲ မရှိဘူး...
မြင်တောင်မမြင်ဘူးလိုက်ဘူး။ တစ်ခါတစ်ခါ မှာတော့
သူများတွေလို အဖိုးရေ အဖွားရေ လို့ခေါ်ချင်လိုက်တာ.... :(
နောက်ကျသွားပြန်ပြီ အကိုတိူ့ များတော့အသက်၁၀၃နှစ်အဘိုးနဲ့ ၉၈နှစ်အဖွားရှိခဲ့ ဘူးတယ်
လူမူ့ ဘ၀ လုံခြုံတဲ့ လူနေမှု စနစ်ရှိနေမယ်ဆိုရင်
မနက်က အလုပ်ရှုပ်နေတာ နဲ့ သေချာ မဖတ် လိုက်ရဘူး ....ကိုဖိုးစိန် အဖိုးအကြောင်း ဖတ်ပြီးတော့ မေလေးကို သိပ်ချစ်ရှာတဲ့ မေလေးအန်းကုန်းကို သတိရမိတယ်..ခုတော့ မရှိရှာတော့ဘူး ....မေလေးကျေးဇူးတောင် မဆပ်လိုက်ရပါဘူး...
မေလေးစရေးထဲက လာအားပေးတဲ့ အတွက် ကျေးဇူး ပါနော်...ကိုဖိုးစိန်တို့လိုသူငယ်ချင်းတွေရဲ့ အားပေးမှုနဲ့ မေလေးဆက်လျှောက်နေတာပါ
ပန်ပန် ပြောသလို ပဲ
အစအဆုံး ပါအောင် ဆွဲခေါ်နိုင်တယ်
ချီးကျွေးတယ်ဗျာ အဲလေ ချီးကျူးတယ်ဗျာ
ကျွန်တော်လည်း အဖိုးအဖွားတွေကို မမီလိုက်ပါဘူး။ ဒါပေမယ့် မိဘတွေပြန်ပြောပြတဲ့ သူတို့အကြောင်းတွေကတော့ ငယ်ငယ်ကအိပ်ရာဝင်ပုံပြင်တွေ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့လေ။
ကျွန်တော်အသက်ကြီးရင်တော့ဒုက္ခ၊ မိန်းမမရဖို့ ၁၀၀%သေချာနေပြီဆိုတော့ သားတွေမြေးတွေနဲ့ သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း နေရဖို့ ဝေလာဝေးပေါ့ဗျာ။
ကျွန်တော်တော့ အသက်ကြီးလာရင် အထုပ်ကြီးကြီး
တထုပ် လုပ်ထားရမယ် ဘယ်သွားသွား အဲဒီအထုပ် သိမ်းထားတဲ့ သေတ္တာသော့ကို တကိုင် ကိုင် လုပ်ပြီး ပြနေရမယ်...။သားသမီးတွေ မြေးတွေက ဘာအထုပ်လဲကြည့်ချင်ပါတယ် ဆိုတောင် မပြဘဲထားမယ်...။ဒါမှ အထုပ်မျက်နာနဲ့ ပြုစုကြမှာလေ
ကျွန်တော်သေမှ အထုပ်ဖြေကြည့်လို့ သတင်းစာ စက္ကူ တွေ ဖြစ်နေရင် လည်း သူတို့ ဆဲချင်ဆဲ ပလေ့စေပေါ့
ဒါကြောင့် ပြောတာပေါ့။ အဘိုးအဘွားကို ပိုဂရုစိုက်ကြပါလို့:)) အင်းနော်..ငါတော့ အသက်ကြီးလာတဲ့တနေ့ မြေးတွေ မငြိုငြင်တဲ့ အဘွားဖြစ်ရရင် ကောင်းမှာပဲလို့ တွေးမိတယ်ဟ။
အမှန်ပဲ ကိုဖိုးစိန်ရေ..။ မိဘတွေ အသက်ရှင်တုန်းမှာ ကျွန်တော်တို့ သားသမီးတွေ ဂရုစိုက်ရမယ့် တာဝန် အရမ်းအရေးကြီးပါတယ်။ ဗဟုသုတပါ ရတယ်ဗျာ..။ ဆုံးသွားတဲ့ အဖိုးနဲ့အသက် ၉၄ နှစ်ရှိနေပြီ ဖြစ်တဲ့ ကျွန်တော့် အဘွားကို သတိရသွားတယ်ဗျာ..။ ဒီတခါပြန်ရင် သေချာပြုစုဦးမယ်ဗျာ...။
အီး အကိုေ၇ ညီလေးတော့ အဘိုးတွေ မသိဖူးဗျ
အဘွားနဲ့ပဲနေ၇တော့အစ်ကိုတို့ လို ဘဝလေးနေချင်တယ်
အဘွားဆိုလို့ အမေ့ဖက်က တစ်ဦးတည်းသောအဖွားပဲရှိတယ်
အကြီးဖြစ်ချင်တယ် ဗျာ ဒါမှ အစ်ကိုတို့ လို အဖိုးတွေ အဖွားတွေ ချစ်တာခံချင်တာ
ထိပ်ဆုံးကရမလားဆိုပြီး ပြေးလာတာ အရှေ့မှာ ၂၆ ယောက်တောင်ရှိသွားပြီ...
ဖိုးစိန်...နောက်ဆိုရင် ကိုလူထွေးအတွက် နေရာဦးပေးထားဘာ... ဒါပဲ...
မဟုတ်ရင်တော့ ဖိုးဖိုးချစ်ရအောင်ကြီးကို ဆုံးမခိုင်းလိုက်မယ်...
ကိုဖိုးစိန်ရေ ဖတ်ပြိး ခံစားရပါတယ်ဗျာ...။
ကြားဖူးတဲ့ စကားတခုလိုပေါ့ စုန်ရေသာရှိတယ် ဆန်ရေ မရှိဘူးတဲ့...။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါလေ ဖြစ်ပြီင်္းသမျှကို သင်ခန်းစာယူပြီး ကိုယ့်အလှည့်နဲ့ ကိုယ့်သားသမီးတွေ အလှည့်မှာ ဒါမျိုးတွေ မဖြစ်ရအောင် ကြိုးစားကြစို့ဗျာ...။
အသုံးမဝင်တော့တဲ့ အသက်အရွယ်ထိလဲ အသက်မရှည်ချင်ဘူး...
Most of beings love their life until die.
Only Very few peoples like to die by abnormal way.